Magnetic Kubata System Vagadziri & Vatengesi - China Magnetic Kubata System Factory
Iyi yakasimba yemagineti gomo inokodzera pfuti, pfuti, pfuti, revolvers, pfuti, uye pfuti dzemhando dzese kuti dzihwande mumba kana mumotokari kudzivirira, kana kuratidza. Zviri nyore kwazvo kuisa kuti ugone kuzvimisikidza chero kupi pasina kunetsa!
Magnetic Gun Gomo neRubber Kuputira
Iyi yakasimba yemagineti gomo inokodzera pfuti, pfuti, pfuti, revolvers, pfuti, uye pfuti dzemhando dzese kuti dzihwande mumba kana mumotokari kudzivirira, kana kuratidza. Yako yepamusoro logo kudhinda inowanikwa pano.
Rubha Rakafukidzwa Magnetic Base Gomo Bracket yeMota LED Positioning
Iyi magnetic base mount bracket yakagadzirirwa yedenga remota mwenje mwenje kubatisisa nekumisikidza. Chakafukidzwa cherabha chivharo izano rekuchengetedza iyo pendi yemota kubva mukukuvara.
Rabha Pot Magnet neHandle
Iyo yakasimba Neodymium magineti inoiswa nemhando yepamusoro yerabha yekumhara, iyo inovimbisa yakachengeteka yekubata pamusoro kana iwe ukaisa iyo yemagineti chiratidzo gripper pamotokari nezvimwe. Yakagadzirwa neyakareba mubato wakagadzikwa pamusoro, ichipa mushandisi imwe yekuwedzera mukana paanomisa kazhinji akaomesera vinyl. mhizha.
Rectangluar Rubber Yakavakirwa Kubata Magnet
Aya rectangular rabha akafukidzwa magineti magnet akasimba kwazvo akashongedzerwa netambo imwe kana mbiri dzemukati. Irabha yakafukidzwa magineti inogadzirwa zvizere zvemhando yepamusoro zvigadzirwa nekudaro kuve nechokwadi chakasimba uye chinogara chigadzirwa. Iyo magineti yerabha ine tambo mbiri inogadzirwa yegiredhi N48 yekuwedzera simba
Rabha Pot Magineti ine Kunze Thread
Aya magineti erabha ehari anonyanya kukodzera kugadzirirwa zvinhu zvine magineti netambo yekunze senge kushambadza kuratidza kana blinkers yekuchengetedza pamatenga edzimba. Irabha rekunze rinogona kudzivirira mukati memagineti kubva kukuvara uye ngura-chiratidzo.